Xukuumaddii Tunisa oo dhacday - BBC Somali
Xukuumaddii Tunisa oo dhacday
15 Jannaayo 2011
Image caption Zeyne Cabidiin Bin Cali, Madaxweynihii Tunisiya oo dalka ka cararay ka dib markii si weyn loogu mudaaharaaday.
Ra'iisal Wasaaraha dalka Tunisiya, Mohamed Ganuushi ayaa ugu baaqay ciidamada amaanka in ay ilaaliyaan kala danbeynta, saacado ka dib markii uu madaxweynihii dalka Zeyn Caabidiin Bin Cali oo ka cararay mudaaharaadyo isaga looga soo horjeeday.
Mr. Ganuushi ayaa mar hore amar ku siiyay ciidamada qalabka sida in ay soo afjaraan bililiqada iyo weerarada ka dhan ah dadka ee ka socota meelo ka mid ah dalka oo dhan.
Dad degan magaaladda Tunis ee caasumadda ah ayaa ku waramaya in dhalinyaro wax bililiqeysaneysa lagu arkayo wadooyinka, isla markaana ay wadooyinka ka muuqanin ciidamada boliiska.
Mar sii horeysay, ayaa Mr. Ganuushi waxaa uu sheegay in uu awoodda la wareegay, kulana uu la yeelanayo maanta xibiyada siyaasadda si ay uga wadaxaajoodaan sidii lagu sameyn lahaa xukuumad cusub.
Madaxweynihii hore ee dalka Tunisiya, Bin Cali ayaa dalkaasi xukumayay muddo seddex iyo labaatan sanadood ah, waxuuna hadda ku sugan yahay sida ay sheegtay xukuumadda dalka Sacuudiga magaaladda Jidda, isaga iyo xubno ka tirsan qoyskiisa.